Fiteny slava - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Teny slava)
Ny fiteny slava dia ireo fiteny indô-eorôpeana ao amin' ny vondrom-piteny baltô-slava. Vondrom-pitenin' ny olona monina ao Eorôpa Afovoany sy ao Balkana sy ao Eorôpa Atsinanana sy ao Siberia ary ao amin' ny tapany farany atsinanan' i Rosia ary ao Azia Afovoany.
1 Sampan' ny fianakaviam-piteny slava
1.1 Fiteny slava atsinanana
1.2 Fiteny slava andrefana
1.3 Fiteny slava atsimo
2 Fanoratana ny fiteny slava
Sampan' ny fianakaviam-piteny slavaHanova
Mizara fianakaviana telo ireo fiteny slava ireo, dia ny fianakaviam-piteny slava atsinanana sy andrefana ary atsimo.
Fiteny slava atsinananaHanova
Ny fiteny rosiana, ny fiteny bielôrosiana, ny fiteny rotena na rosina ary ny fiteny okrainiana dia ao amin' ny fianakaviam-piteny slava atsinanana.
Fiteny slava andrefanaHanova
Ny fiteny tseka, ny fiteny slôvaka, ny fiteny soraba ary ny fiteny pôlôney sy ireo fiteny lesitika tahaka azy (fiteny kasoba, polaba, slôvitsa ary silesiana) dia ao amin' ny fianakaviam-piteny slava andrefana.
Fiteny slava atsimoHanova
Ny fiteny serbô-krôaty (fiteny krôaty, fiteny bôsniana, fiteny môntenegrina, fiteny serba) sy ny fiteny bolgara, ny fiteny makedôniana ary ny fiteny slôvena dia isan' ny fianakaviam-piteny slava atsimo.
Fanoratana ny fiteny slavaHanova
Soratana amin' ny abidy latina nampiana mari-tsoratra ny fiteny ao amin' ny fianakaviam-piteny slava andrefana. Ireo fiteny ao amin' ny fianakaviam-piteny slava atsimo dia soratana amin' ny abidy sirilika sy amin' ny abidy latina. Ny fiteny ao amin' ny fianakaviam-piteny slava atsinanana dia soratana amin'ny abidy sirilika.
Vondrona ao amin' ny fianakaviam-piteny indô-eorôpeana
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiteny_slava&oldid=1001774"
Dernière modification le 27 Febroary 2021, à 00:32
Voaova farany tamin'ny 27 Febroary 2021 amin'ny 00:32 ity pejy ity.